Posted By motorcarmyanmar 11 May 2020
တစ်ဝေးတည်းသွားလာနိုင်မည့် KIA Sorento GT Line
Luxury Options များစွာပါဝင်ပြီးဆွဲမက်စရာ ယခုဝယ်လျှင် နောက်ထပ် (3) လ လစဉ်ကြေးပေးသွင်းစရာမလိုသည့် Own KIA Now Pay Later အစီအစဉ်ဖြင့်7ယောက်စီး Luxury grade ကားအမျိုးအစား KIA Sorento GT Line ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ…..
7 ယောက်စီး ဖြစ်လို့ မိသားစုများများဖြင့် တစ်စုတစ်ဝေးတည်း သွားလာနိုင်မည့်အပြင် All-Wheel Drive ဖြစ်လို့ မြို့တွင်းမြို့ပြင် စိတ်တိုင်းကျမောင်းနှင်နိုင်မည့် KIA Sorento GT Line ကို Own KIA Now Pay Later အထူးအခွင့်အရေးဖြစ်သည့်
✅ပထမ သုံးလစာအတွက် အတိုးရော၊လစဉ်ပေးသွင်းငွေကိုပါ သုံးလတိတိပေးသွင်းစရာမလိုခြင်း၊
✅10% Down Payment ✅7 Years Installment ✅7 Years Warranty ✅Yangon License ✅Special Interest Rate အစရှိသည်တို့ရရှိမှာဖြစ််ပါတယ်ရှင်…..
ယခုလို Covi-19 ကာလအတွင်းမှာ Online ကနေ Register ပြုလုပ်ရုုံဖြင့် Sale Advisor များမှ KIA ကားများတွင်ပါဝင်သည့် Luxury Options များနှင့်အတူ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အထူး အခွင့်အရေးများကို အသေးစိတ်ဆက်သွယ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်…..
***ကားအစီးအရေအတွက် ကန့်သတ်ထားပြီး 15.5.2020 အထိသာရရှိမှာဖြစ်လို့ အောက်ပါ Link တွင်အခုပဲ Register ပြုလုပ်လို်က်ပါ….. Link: https://supersevenstars.com/kia/eshowroom
Hotline - 09977008888
Buy now, you can ownaluxury grade car type kia sorento gt line with no more (3) monthly payment.....
7 people can walk together with families, asaall-wheel drive, kia sorento gt line, own kia now pay later, as it's all-wheel drive.
✅ for the first three months, no need to pay for three months.
✅10% Down Payment ✅7 Years Installment ✅7 Years Warranty ✅Yangon License ✅ Special interest rate etc are available.....
In this time, in the covi-19 period, the sale advisors will provide details about the special opportunities described above, along with luxury options that are included in kia cars.....
*** Limited number of vehicles and will only get up to 15.5.2020 so register now at the link below.....